MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 5
တရုတ်မြန်မာနယ်စပ် ကျောက်မျက်ဈေးကွက် - Gem trade in China Burma border
>Nagis Storm Suvivor from Dedaye - First Hand Experience
>ပေဵာက်ဆုံးနေတဲ့ သံဃာမဵား စာရင်း - ၁
ခင်လွန်း ● ဖုတ်ကောင်ချင်း လွမ်းစကား
>MoeMaKa celebrates April Fools' Day
>Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity (29th August 2011)
ပြင်သစ်ပြည်၊ ပါရီက ကာတွန်းမဂ္ဂဇင်းတိုက် အကြမ်းဖက်ပစ်သတ်ခံရ၊ လူ ၁၂ ဦး သေဆုံး
ပန်းချီ ထွန်းဝင်းငြိမ်း၏ ပန်းချီပြပွဲ ဖိတ်
လင်းသစ်နီ ● ငပျင်း
လင်းသစ်နီ ● ငပျင်း (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၉ ဇာတ်​လမ်းမှာ အကုန်လုံးကေ​ခါက်​ဓားေ​တွချည်ပဲ​ ဘာလို့ ပုလင်းလွတ်​ထဲက စာကို ​မျှော်​လင့်​ချက်​နဲ့ အနားသတ်​ချင်​ရတာလဲ ​အဓိပ္ပာယ်မရှိ မြင်​ကွင်းဆုံးလည်း ပင်​လယ်​​ရေက ငံတယ်​...
ရဲဘော်ငွေ ● မမစိန်တို့ ဇနီးမောင်နှံ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၉ (၁) အခု ကျွန်မရေးနေတဲ့ မမစိန်ဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်ကတော် ဒေါ်သန်းစိန်ပါ။ ဒေါက်တာ လှကျော်ဇော၊ ဒေါ်စန်းကျော်ဇော၊ ကို အောင်ကျော်ဇော...
Photo Credit – Digital Media Pro / Haoka / Shutterstock / Paul Spella / The Atlantic ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) –...
မောင်သာနိုး – သတိပြုသင့်သည့် မြန်မာစာလုံးပေါင်းများ
photo – dated 23rd Oct 2004, Maung Thar Noe, Tin Moe and Maung Swan Yi @ USA မောင်သာနိုး –...
ကိုသန်းလွင် ● လွတ်လပ်ခွင့် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၉ (၁) ၁၉၆၈ ခုနှစ်ကစာစီစာကုံးတခုတွင် ဂျရပ်ဟာဒင် (Garrett Hardin) က လူတွေကို “အရာအားလုံးမှာ လူတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကြိုက်သလို...
လင်းသက်ငြိမ် ● နှလုံးသားမပါတဲ့ ပေါင်မုန့်တွေ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၈ မှန်ကောင်တာထဲက ပေါင်မုန့်ဖြစ်ဖြစ် ခြင်းထဲက ပေါင်မုန့်ဖြစ်ဖြစ် အတူတူ အနူနူပဲ အကောင်းစားပေါင်မုန့်ဖြစ်ဖြစ် အညံ့စားပေါင်မုန့်ဖြစ်ဖြစ် ပေါင်မုန့်စရိုက် ပေါင်မုန့်အချိုးက တစ်ပုံစံတည်း...
မောင်စွမ်းရည် – စာပေဝေဖန်ရေး
မောင်စွမ်းရည် – စာပေဝေဖန်ရေး (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၉ ကျနော် အခုအခါမှာ ပြေးရင်းလွှားရင်း အမေရိကားမှာပဲ သော`င်တင်နေပါတယ်။။ ၁၄-၅ နှစ် ကြာခဲ့ပါပြီ။ ၂၀၁၅-၁၆ တို့မှာ ဗမာပြည်ကို ခနပြန်တယ်။...
မောင်အောင်မွန် ● ကျွန်တော်တွေးမိသလို ရေးပါမည် (၃၉၈) (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၉ ဆရာမြသန်းတင့် ကွယ်လွန်ခြင်း ဆယ်ကြိမ်မြောက် ကျွန်တော့်ဇနီးက ဆရာမြသန်းတင့် ကွယ်လွန်သွားပြီဟု Washington DC သို့ တယ်လီဖုန်းဆက်ပြော၍...
ကျော်ဟုန်း ● စိတ္တဇ အလင်္ကာ ရှင်းတမ်း (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၉ ကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ် ရူးနေရတာဆိုတော့ ကိုယ်လိုအရူးတွေ ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ အားမငယ်ပါဘူး ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားက လူတွေအားလုံး အရူးတဲ့။ အားမငယ်ပါဘူး တွေးခေါ်ပညာရှင်တွေ...
ကိုအောင်မှိုင်း ● ချဉ်ဖတ်အိုး (မိုမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝ၁၉ ● မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  ပထမချဉ်ဖတ်အိုးကို ရိုက်ခွဲခြင်း မဆလခေတ်မှာ လူဖြစ်ခဲ့ကြသူတွေကတော့ ချဉ်ဖတ်အိုးဆိုလိုက်တာနဲ့ မျက်စေ့ထဲတန်းမြင်ကြမယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။ ကနေ့လူငယ်တွေကတော့ ချဉ်ဖတ်အိုးဆိုရုံနဲ့သိလိုက်ကြမှာက...
ကာတွန်း လိုင်းလုဏ်ရဲ့ အမိန့် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဆောင်းယွန်းလ – “အမေရိကန်ဖဲဝိုင်း”
ဆောင်းယွန်းလ – “အမေရိကန်ဖဲဝိုင်း” (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၉ အစိုးရက ဖဲဒိုင်ကိုင်ပြီး ပြည်သူက ထိုးသားတွေဖြစ်တယ် ဒီဖဲဝိုင်းကြီးထဲမှာ ဒိုင်က ဖဲလိမ်ရိုက်ပြီး ထိုးသားက ဖဲခိုးပြီးရိုက်တယ် အနိူင်အရှုံးဟာ သူတို့ နှစ်ဦးစလုံးအတွက်တော့ မဆန်းတော့တဲ့...
ကာတွန်း မောင်ရစ် – တမတ်သား (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
မြင့်ကျော် – သေဒဏ်
မြင့်ကျော် – သေဒဏ် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၉ ဦးကို နီကို လုပ်ကြံပြီး အငှားကားဆရာ ကိုနေဝင်းကို သေနတ်နဲ့ ပစ်ခဲ့တဲ့ ကြည်လင်းကို သေဒဏ်အမိန့်ချ၊ ဦးကိုနီလုပ်ကြံမှုမှာ စီစဉ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အောင်ဝင်းဇော်ကို...
ကာတွန်း ကိုခေတ် – ကွင်းဆက်
ကာတွန်း ကိုခေတ် – ကွင်းဆက် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၉ Tags: ကာတွန်း ကိုခေတ် Related posts ကာတွန်းကိုခေတ် – ဆွဲအား (0) ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့...
Page5of 952«1...34567...952»